स्मार्टफोन Archives - Lokpati.com
Tag - स्मार्टफोन
ओपोकाे ए १५ एस सार्वजनिक, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडाैँ। ओपोले नेपालमा ए सिरिज अन्तर्गत आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन ओपो ए १५ एस सार्वजनिक गरेको छ । ६.२ इन्च स्क्रीन भएको ओपो ए १५ एस नेपालमा सार्चजनिक भएको हो। यस फोनमा ४ हजार २ सय ३० एमएएचको ब्याट्री जडान गरिएको छ। फोनमा एआई ट्रिपल...
एजेन्सी। नेपालीमा एउटा उखान छ, बाँदरको हातमा नरिवल। अहिले स्मार्टफोनको हकमा ठ्याक्कै यो उखान मिल्छ। हत्केलाभरको यो प्रविधि खासमा हाम्रो दैनिक जीवनका लागि एक अभिन्न सहयोगी बनेको छ।
कसैसँग सम्पर्क गर्नु परेमा, कुराकानी...
‘टिकटक’ ले आफ्नै स्मार्टफोन ल्याउँदै, बजारमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
काठमाडौं, १९ साउन। टिकटक बनाउने कम्पनी स्मार्टफोन बजारमा प्रवेश गर्ने भएको छ। भिडियो शेयरिङ एप टिकटकको शानदार प्रदर्शन पछि टिकटक बनाउने कम्पनी स्मार्टफोन बजारमा प्रवेश गर्ने भएको हो।
वर्तमान अवस्थामा ५० करोड...
स्मार्टफोनको ब्याट्री टिक्दैन ? ब्याट्री टिकाउने ८ सुत्र
काठमाडौं। तपाईको मोबाइलको ब्याट्री छिटो सकिन्छ ? चिन्ता नगर्नुस्, यी ७ टिप्स अपनाउनुस्, घण्टौंसम्म मोबाइल चलाउन सकिन्छ। हाम्रो सामान्य सावधानीले ब्याट्री टिकाउने मात्र होइन, ब्याट्रीको आयु पनि लम्बाउन सकिन्छ।
स्मार्टफोन किन्दा ध्यान दिनुस् यी पाँच कुरामा !
काठमाडौं । बजारमा निकै धेरै ब्राण्ड, फिचर, तथा मूल्यका स्मार्टफोन उपलब्ध छन्।यस्तोमा आफ्ना लागि उपयुक्त स्मार्टफोन खरीद गर्नु सजिलो काम होइन्।
स्मार्टफोन यस्तो होस्, जसमार्फत स्मार्ट फोनबाट लिन सकिने सबै सुविधा प्राप्त गर्न...
स्मार्टफोन तात्नबाट कसरी जोगाउने ? (सजिला ६ उपाय)
काठमाडौं । स्मार्टफोन धेरै चलाउने मानिसहरुले आफ्नो फोन धेरै तात्ने गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । आफूले प्रयाग गर्ने स्मार्टफोन सामान्य रुपमा चलाउँदा पनि तात्ने गरेको अनुभव हामी आफैंले पनि गरेकै छौं ।
मोबाइल फोनमा लामो...
यस्ता छन् स्मार्टफोनको लत छुटाउने मोबाइल फोनका विशेषता
एजेन्सी । ठूलो स्क्रिनयुक्त स्मार्टफोनको ट्रेण्ड सुरु भएसँगै फिचर फोनहरु बजारबाट हराए । यद्यपि स्मार्टफोनमा अत्याधुनिक फिचर तथा सुविधाहरु उपलब्ध छन् । तर, अहिले पनि फिचर फोन मन पराउने मानिसहरुको संख्या कम छैन ।
सामसुङको नयाँ फोल्डिङ् स्मार्टफोन, के छन् विशेषता ?
सानफ्रान्सिस्को, ९ फागुन । दक्षिण कोरियाको विश्वविख्यात स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी सामसुङले बुधबार फोल्डिङ गर्न मिल्ने नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । विश्वमै फोल्ड गर्न मिल्ने मोबाइल निर्माण गर्ने सामसुङ पहिलो...
स्मार्ट फोन अहिले प्राय: सबै मानिसले बोकिरहेका हुन्छन् । उनीहरुले आफ्ना अफिसियल कामहरु पनि स्मार्ट फोनबाटै...
सामसुङको आम्दानीमा २ वर्ष यताकै उच्च गिरावट
काठमाडौं । सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सको नाफा २९ प्रतिशतले घटेको छ । विगत दुई वर्षयता कम्पनीको यो ठुलो घाटा हो ।
चिनीया स्मार्टफोन निर्माताहरुबाट सिर्जित बढ्दो प्रतिस्पर्धा र स्मार्टफोनको मूल्यमा भारी गिरावट आएका कारण सामसुङको...